२०७४–चुनाव – Page 46 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
काठमाडौं । अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) काठमाडौंको जिल्ला भेला सोमबार ललितपुरको कुपण्डोलमा सम्पन्न भएको छ । संगठन विस्तार तथा जनपरिचालन अभियान अन्तर्गत सम्पन्न उक्त भेलाले शान्ता पण्डितको अध्यक्षतममा २१ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन गरेको छ । नव निर्वाचित समितिको उपाध्यक्षहरुमा सुमित्रा न्यौपाने, कुमारी थापा, सुधा पन्थी, अमिरमैयाँ रञ्जितकार रहेका छन् । त्यसै गरी सचिवमा […]
जनतामा चेतनास्तर बढ्दै गएपछि डाइनोसरसले रुप परिवर्तन गरेर छेपारोको रुप धारण गरेर बदलिए झैं साम्राज्यवादले पनि नयाँ नयाँ रुप र कलेबरमा आफ्नो साम्राज्य फैलाउने गरिरहेको छ । एक समय थियो सम्राट हुनु, साम्राज्य फैलाउनुलाई शान र गौरवको विषय मानिन्थ्यो । सम्राट अशोक, महासामन्त अंशुवर्मा, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी देवी जस्ता नाम राख्दा शान र शौकतको विषय हुन्थ्यो […]
मुलुकको सरकारका विषयमा धेरै चर्चा र वहस चलेको छ । त्यो वहस के भने एकथरी मानिसहरु मुलुकको वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट सरकार हो । मुलुकमा अब कम्युनिष्ट शासन आयो, जनवाद आयो । अब यहाँ क्रान्तिस्र्रान्तिका कुरा हुँदैनन्, अब मुलुक विकास र समृद्धिको दिशातिर जान्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट सत्ता आयो । अब भारेभुरे कम्युनिष्ट यसैमा आएर बिलिन […]
काठमाडौं । संरक्षणवादी आर्थिक नीति अबलम्बन गर्न पुगेको ट्रम्पको अमेरिका आजका दिनमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को विरुद्धमा उत्रिन पुगेको छ । उदारीकरण, खुलाबजार अर्थतन्त्र, विश्वव्यापीकरण र स्वतन्त्र व्यापारको आजसम्म नेतृत्व गर्दै आएको अमेरिका अब उसले अबलम्बन गर्न पुगेको संरक्षणवादी नीति विश्व व्यापार संगठनको चलिरहेको नीति विरुद्ध हुन पुगेको छ । आफूले नेतृत्व गर्दै आएको […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Artha Jagat, International News, mainNews
काठमाडौं । चीनबाट पनि रेल र भारतको रक्सौलबाट पनि रेल ! काठमाडौंमा उत्तरी रेल र दक्षिणी रेल । रेलै रेल । तर यी फगत सपनाका रेल नहोलान् भन्ने संभावनालाई नकार्न सकिदैन । विज्ञहरुले भन्न थालेका छन् काठमाडौंमा सामान्य रेलहरु होइन, लिफ्ट रेल चीन र भारत जहाँ पनि आउन र जान सक्छन् । पछिल्लो भौगोलिक तथा […]
काठमाडौं । बिम्स्टेक सम्मेलनपछि अब बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको ध्यान भारतको पुणेमा हुन लागेको बिम्स्टेक सेन्य अभ्यासतिर बिस्तारै तानिन थालेको छ । यो सैन्य अभ्यास कसैका विरुद्ध नहुने भनिए पनि सैनिक र सैनिक गतिविधि कसै न कसैका विरुद्ध परिलक्षित हुन्छ नै । त्यसैले पनि बिम्स्टेक सदस्यका हैसियतले नेपालको सहभागिता स्वयम् नेपालीका लागि पनि पचिराखेको छैन । […]
काठमाडौं । १८–बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको पहिलो दिन उपस्थित राष्ट्र प्रमुखहरुको सम्बोधन पछि साँझमा रात्रीभोज र भेटघाट चलेको थियो । सम्मेलनको दोस्रो दिन पारस्पारिक हित र सामूहिक आवश्यकताका आधारमा तयार पारिएका सम्मलेनका एजेण्डामाथि छलफल गरिएको थियो । यो छलफलपश्चात् समसामयिक १८–बुँदे […]
अर्थतन्त्र उकालो लाग्यो वा अर्थमन्त्रीको होश खुल्यो ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेकपाको बहुमतले सत्ता सम्हालेको ६ महिनाभित्रै देशको अर्थतन्त्र उकालो लागेको तथ्यांक पेश गरेर सबैलाई चकित पारिदिएका छन् । उनले अब देशले आर्थिक गति लिन थालिसकेको बताएका छन् । ६ महिनाअघि बर्बादीको दिशामा धकेलिएर मूर्छा परेको देश ६ महिनापछि झङलंग ब्युँझिएको छ । ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको आर्थिक होश फिरेको […]